Isiokwu a na-akpọ “The uwe quandary: 'Ọ bụ ihe nro. Ma, ihe niile bụ ihe efu '” e dere site Jessica Glenza na New York, n'ihi na theguardian.com on Friday 27 February 2015 22.41 UTC
Ọ bụ a ụkọ feat maka a meme ka iri ari nke ugwuuhiri nke internet na omenala na n'ime nsụhọ nke-adị kwa ụbọchị folks. Karịsịa mgbe ọ na-eme dị ka ngwa ngwa dị ka "uwe" mere.
N'etiti Thursday mgbede na Friday ụtụtụ, uwe na-eto si a Tumblr post site ihe Irish musician otu mba onu na isiokwu nke arụmụka gafee n'ụwa.
The n'isi sekpụ ntị nke uwe ajụjụ, na ma eleghị anya arịrịọ ya, dị mfe: bụ frock na-acha ọcha na ọla-edo, ma ọ bụ anụnụ anụnụ na nwa?
Na onu nwere ike ịbụ n'ihi nke a dị mfe ngwa anya nro, ihe ambiguity, ma ọ bụ ọ pụrụ ịbụ na a ọzọ mgbagwoju. N'agbanyeghị ihe kpatara, ọ bụ a foto na-adịghị ọbụna nghọta nnyocha pụrụ ekweta na.
"Ya mere, anyị nke ọhụụ na-anụ bụ n'ezie ezi,"Kwuru Howard C Hughes, onye investigates usoro ndị nghọta na Dartmouth College Ngalaba nke psychological na ụbụrụ na sayensị. "Ọ bụrụ na ọ bụghị ya, anyị nwere ike ije n'ọnụ ụzọ, na anyị na-enweghị ike na-agba ọsọ 50 yaadị na enwetaghị a ada bọl na center ubi. "
Na mpempe, na ị bụghị crazy: ọtụtụ ihe ị na-ahụ bụ ihe ndị ọzọ na-ahụ. Ma Hughes-echetara anyị na ihe anyị na-"ịhụ" na-adịchaghị mkpa bụ isi àgwà anyị na-aghọta, karịsịa mgbe anyị na-arụ ọrụ na-enwechaghị ihe ọmụma, dị ka a grainy, abụọ na-akụkụ foto.
Ndị oyiyi na-ata ata elu data anakọtara site anyị anya na reassembled site uche anyị, ekewet site mgbagwoju ndu na psychological Filiks.
"Nke ahụ na-emepụta, Echere m, mmetụta na … anyị dị Lee ihe na-esi n'ebe,"Ka o kwuru. "Ma anyị nwere iji rụọ na - ụbụrụ nwere iji rụọ na - na ndị mmadụ nwere na-aghọta na a na-adịchaghị mkpa ụzọ gị mkpa anya ịhụ, ma gị mkpa a ụbụrụ aghọta, mere na nghọta bụ ihe nke ahụ na-ewepụtara. "
The uwe quandary na-elekwasị anya na agba, a uzọ na bụghị "ezigbo" kwa se. Ahụmahụ nke agba bụ uzọ nke ogologo nke na-ahụ anya ìhè ụzarị gosipụtara site a n'elu, tụgharịrị ka otu n'ime atọ nke isi na agba site mmadụ anya.
Ọmụmaatụ, ihe anyị na-ahụ dị ka "red,"Abụghị intrinsic àgwà nke ihe. Kama, ọ bụ ụmụ mmadụ 'n'ụzọ dị ịrịba ama homogenous banyere gosipụtara ìhè. Ma e nwere ọtụtụ ụmụ anụmanụ na-enweta ọtụtụ ihe na agba ukwuu dị iche iche karịa ụmụ mmadụ. The eyeballs nke Mantis oporo, ọmụmaatụ, nwere 12 agba na-anabata ya tụnyere ụmụ mmadụ 'atọ.
Ma mgbe ajụjụ nwere ike iyi inconsequential, ọtụtụ ndị achọpụtala na foto eje ozi dị ka a na-adọrọ mmasị atụ nke interplay nke ụmụ mmadụ na usoro ndu na nghọta - constructs na-eme ka ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị mụọ ubi nke ụbụrụ sayensị.
"E nweghị ihe mere na-eche na niile nju nke ịrịba usoro na ọ dịghị onye n'ezie, n'ụzọ zuru ezu na-aghọta adịghị onye dị iche iche,"Kwuru Hughes. "Ugbu a, otú a image mere ndị dị otú ahụ ihe dị ịtụnanya ọrụ nke na-eme na mwute doro anya - m na na na na. Ma m na-eche ihe mere na ọ n'ịwa nke ukwuu okpomọkụ n'etiti ndị na-ọtụtụ n'ime anyị na-eche anyị dị Lee ihe na-esi n'ebe ahụ. "
Hughes kwuru isiokwu ga-abụ na n'okpuru ọzọ nnyocha, na hypothesized na-acha anụnụ anụnụ na-acha ọcha na onu nwere ike ịbụ n'ihi ihe ọ bụla si anomalous trichromats (ndị nwere ubé dị iche iche ezi nke isi na agba) ka a (nnọọ ike) reversing ngwa anya nro, mgbe ụfọdụ na-akpọ onye ambiguity.
Onye ọ bụla na-agbalị ịgbanwe nghazi nke convex na concave okirikiri, ma ọ bụ a spinning silhouette ga-enwe echiche otú ike ụfọdụ otú ahụ ihe oyiyi na-iji tụgharịa, ma ọ bụ "disambiguate".
Ọzọ nghọta na-eme nchọpụta. Robert Fendrich, gwara Hughes ọ hụrụ uwe dị ka ọlaedo na-acha ọcha na Thursday mgbede, na-acha anụnụ anụnụ-nwa na Friday ụtụtụ, otu n'ime nke na-egosi onye na-nta nke ndị mmadụ ike reorient oyiyi. Fendrich bụ a na-eleta ọkà mmụta nke na Dartmouth College, nakwa na psychological na ụbụrụ na sayensị ngalaba.
Ná Whitney Laboratory maka nghọta na Action na University nke California Berkeley, David Whitney kwuru oyiyi si mmetụta dị mfe - ọ bụ ihe ambiguity nke inference.
"Ị bịara Ìhè ahụ na-eti na uwe na-, na m bịara na ìhè na-abịa n'azụ onye ahụ na uwe,"Kwuru Whitney. "Ọ Juda ala a n'ezie mfe iche, ma ọ bụ a n'ezie mfe ambiguity. "
"Ọ bụ ihe nro,"Kwuru Whitney. "Ma, ihe niile bụ ihe efu."